Guddoomiyaha cusub ee Baarlamanka KGS ayaa si rasmi ah xilka ula wareegey – Kalfadhi
Guddoomiyaha cusub ee Baarlamanka KGS ayaa si rasmi ah xilka ula wareegey
Guddoomiyaha cusub ee Baarlamanka koonfur Galbeed Dr. Ali siciid Fiqi, ayaa gellinkii dambe ee shalay si rasmi ah ula wareegay xilka, kaddib munaasabad kooban oo ka dhacday magaalada Baydhabo.
Guddoomiyihii hore ee Baarlamanka ahna Wasiiru Dowlaha wasaradda Ganacsiga Dowladda Soomaaliya Mudane Abdikadir Sharif Sheekhuna Maye, oo xilka ku wareejiyay guddoomiyaha cusub ayaa sheegay in Baarlamaanka maamulkaasi uu soo qabtay shaqooyin badan intii uu ahaa guddoomiyaha Baarlamaanka.
Munaasabadda xil wareejinta waxaa goob-joog ka ahaa labada guddoomiye ku-xigeen ee Baarlamanka koonfur galbeed iyo Xildhibaano ka tirsan Baarlamanka .
Ugu horreyn waxaa munaasabadda ka hadlay Guddoomiyihii hore ee Baarlamanka KGS ahna wasiiru Dowlaha Ganacsiga Dowladda Soomaaliya Abdikadir Shariif Sheekhuna Maye isagoona ka sheekeyay waxyabihii u qabsoomey Baarlamanka KGS, wuxuna ilahay uga bariyay in uu xilka la garab galo Guddoonka Cusub ee Baarlamanka .
Dr Ali siciid Fiqi Guddoomiyaha Baarlamanka labaad ee Koonfur Galbeed ayaa ka mahadceliyay sida wanagaasan ee xilka Loogu wareejiyay wuxuna sheegey in mar walba Abdikadir u bahanyahay waya aragnamadiisa iyo Aqoontiisa uusan ka maar min.
Xildhibaan Prof Dhalxa “Labada Gole ee Baarlamaanka waxaa laga helayaa xildhibaanno aan waligood xaadirin kullamada”
Dowladda Soomaaliya oo lagu ammaanay fulinta ajandeheeda sharci dejinta iyo sharciyadii Baarlamaanka uu meel-mariyay